Akanjo bisikileta asymmetrika ho an'ny vehivavy
Palitao sy palitao
Ity dia palitao lamaody tsy misy fangarony vita amin'ny fibre puzzles PU. Ny hoditra synthetic Ultrafine PU dia taranaka fahatelo amin'ny hoditra namboarina sy noforonin'olombelona. Ny lamba tsy misy tenona vita amin'ny rafitra telo misy refy sy meshed dia miteraka toe-piainan'ny hoditra sentetika mihoatra ny hoditra voajanahary amin'ny akora fototra. Ny vokatra miaraka amina impregnation slurry PU vao novolavolaina niaraka tamin'ny rafitra fanokafana sy ny teknolojia fanodinana ny sosona fitambarana, nilalao microf ...
Ity dia palitao lamaody tsy misy fangarony vita amin'ny fibre puzzles PU. Ny hoditra synthetic Ultrafine PU dia taranaka fahatelo amin'ny hoditra namboarina sy noforonin'olombelona. Ny lamba tsy misy tenona vita amin'ny rafitra telo misy refy sy meshed dia miteraka toe-piainan'ny hoditra sentetika mihoatra ny hoditra voajanahary amin'ny akora fototra. Ny vokatra natambatra tamin'ny fampiroboroboana slurry PU vao namboarina niaraka tamin'ny rafitra fanokafana sy ny teknolojia fanodinana ny sosona fitambarana, nilalao velaran-tany goavambe microfiber ary fampidiran-drano mahery. Izany dia nahatonga ny hoditra synthetic PU faran'izay tsara indrindra manana hygroscopicity tena tsara izay hoditra voajanahary fibre collagen vita amin'ny hoditra voajanahary. Ka na inona na inona avy amin'ny mikraoba anatiny, na ny fihenan'ny endrika ivelany sy ny fananana ara-batana ary ny olona mitafy fampiononana, sns. Afaka ampitahaina amin'ny hoditra voajanahary tena izy io. Ho fanampin'izany, ny hoditra vita amin'ny fibre superfine dia ambony noho ny hoditra voajanahary amin'ny fanoherana simika, ny fitoviana amin'ny kalitao, ny fahafaha-mihetsika amin'ny famokarana lehibe sy ny tantera-drano, ny fanamafisana ny ahitra ary ny lafiny hafa. Ny iray hafa, ny fahombiazan'ny hoditra vita amin'ny sentetika dia tsy azo soloina hoditra voajanahary. Mamakafaka avy amin'ny tsena anatiny sy iraisam-pirenena isika, ny akora PU synthetic dia nanolo ny hoditra voajanahary tsy ampy fitaovana amin'ny isa marobe. Ny fampiasana ny hoditra vita amin'ny hoditra sy ny hoditra sentetika ho an'ny kitapo, akanjo, kiraro, fiara ary fanaingoana fanaka dia eken'ny tsena hatrany. Ny fampiharana isan-karazany, ny isan'ny lehibe, ny isan-karazany amin'ny fomban-drazana sy ny sisa dia ny hoditra voajanahary dia tsy afaka hahatratra.
Ity palitao PU ity, dia tsotra sy kanto miaraka amina savony asymmetrika ary ny zaitra manokana eo an-tsoroka sy ny tanany. Ny lamina iray manontolo dia tsara tarehy amin'ny dikanteny tsy mitongilana ary aza manapotika ny hatsarana mahafinaritra. Voalaza fa ny vehivavy dia vita amin'ny rano avokoa, io no fomba mety hampiasana malefaka handresena tsy hilefitra. Ny zipera anoloana sy ny kojakoja hafa dia miloko matte sy Retro mba hahatonga ny akanjo iray ho tsara sy kanto. Misy sosona ao anatiny. Izy io dia azo totofana fenoina fa tsy mifanaraka amin'ny fangatahanao. Ny fitaovana malefaka malefaka, lamba vita amin'ny volo polyester avo lenta. Miaina sy milamina izy io. Paosy zipper tsotra ny lafiny roa amin'ny vatana. Tsotra nefa tsy fohy. Ny famolavolana ny akanjo amin'ny ankapobeny dia tsotra nefa kanto, miaraka amin'ny zaitra manokana amin'ny cuff sy lamaody manampy amin'ny soroka. Izy io dia azo raisina ho akanjo lamaody izay sarobidy aminy.
Previous: Palitao vehivavy biker
Manaraka: Palitao Biker an'ny vehivavy PU
Palitao mitafo rivotra
Miampy SizeLadies Biker Jacket
Vehivavy Miniskirt Fashion
Palitao Biker an'ny vehivavy
Palitao Biker an'ny vehivavy PU
Palitao vehivavy biker
2F, tranobe ara-barotra mahomby, NO 22 Shiqing Road, Distrikan'i Xinhua, Shijiazhuang 050071, faritanin'i Hebei, Sina.